२७. क्रियाशिलता - Harish Bk
Home/ Article/२७. क्रियाशिलता
Harish BK November 22, 2017
Dr. Yogi Vikashnanda:
म प्राज्ञिक लेखनको लागि बनेको मान्छे हैन, कर्म गर्नु नै मेरो क्षेत्र हो ।
मानिससित जम्मा तीन वटा मस्तिष्क छन् । र, ती सबै मस्तिष्कका कार्यहरू बेग्ला–बेग्लै हुन् । पहिलो हो आधारभूत मस्तिष्क जुन कर्र्म प्रधान हुन्छ, दोस्रो मध्य मस्तिष्क जुन भाव प्रधान हुन्छ । र, अन्तिम मस्तिष्क जसलाई नियोकर्टेक्स भनिन्छ यो प्रायः बुद्धिप्रधान हुन्छ । अतः यी तीन मस्तिष्क मध्ये मानिस जुन मस्तिष्क प्रधान भएर जन्मिछ त्यसै अनुरूप उसको क्षेत्र निर्धारित हुन्छ । यदि नियोकर्टेक्स प्रधान भई जन्मियो भने ऊ प्रायः बुद्धिप्रधान हुन्छ अर्थात् तर्क, गणित, विज्ञान आदी उसको आफ्नो क्षेत्र हुन्छ । यदि मान्छे मध्य मस्तिष्क प्रधान भएर जन्मिएको छ भने ऊ भावप्रधान हुन्छ र उसको क्षेत्र हुन्छ – कला, साहित्य, काव्य आदी । त्यस्तै मान्छे आधारभूत मस्तिष्क प्रधान भएर जन्मिएको छ भने उसको क्षेत्र हुन्छ– शारीरिक कर्म गर्नु –जस्तै डौड, खेलहरू, नृत्य, अभिनय, समाजिक सेवा आदी, किनकि यो मस्तिष्क कर्म प्रधान हुन्छ । अतः गान्धीले भनेका कुरामाथि फेरि एक पल्ट गौर गराँै – म प्राज्ञिक लेखनको लागि जन्मेको हैन, कर्म नै मेरो क्षेत्र हो अर्थात् म बुद्धि प्रधान मान्छे हैन, म त कर्म प्रधान मान्छे हुँ । आफ्नो प्रधानता छुट्याउन सकेकै कारण उनी महापुरुष बनेका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । किनभने सानो उमेरमा उनले कुनै पनि प्रतिभा देखाएका पाइँदैन । पढाइको ममिलामा समेत उनले थर्ड डिभिजनमा हाईस्कुल पास गरेका थिए । त्यसपछि एउटा भनाइ नै प्रचलनमा आयो कि यदि कोही थर्ड डिभिजनमा पास भयो भने उसले सानदार सँग भन्थ्यो – म त गान्धी डिभिजनमा पास भएँ , यार ।
गान्धी जिन्दगीभर खासै बौद्धिक वा कलात्मक क्षेत्रमा नलागे पनि उद्धेश्यसहित निरन्तर क्रियाशील रहे र यसैको परिणामस्वरूप एक महापुरुषको जन्म भयो । एकाइसौं शताब्दीमा पनि उनी संसारका दश अत्याधिक मन पराइएका नेताहरूमा पर्छन् भने गुगलमा सर्वाधिक सर्च गरिने जिजस, कार्लमाकर््सपछि उनकै नाउँ आउँछ । यहाँनिर एरिष्टोटलको भनाइ सार्थक भएको छ – महानता अरू केही हैन, लगनशीलताको परिणति हो । यिनैसँग मेल खाने अर्का युग–पुरुष हुन् अलवर्ट आइन्स्टाइन । उनी सानो छँदा मन्दबुद्धिका थिए । उनलाई सवैले हेप्ने गरेकाले एक दिन उनले एक शिक्षकसँग महान हुने सूत्र सोधे र शिक्षकले बताए –निरन्तर अभ्यास । यसैमा टेकी एक लेठेब्रो बालक माईका लालसमेत बने । अतः आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रको भिजन मनमा राखी निरन्तर लागि पर्नाले बुद्धि र कला नभएकाले पनि महान हुने अवसर पाउँछ भने हामी मात्र के कुरामा कमका छौं ? मात्र बाँकी रह्यो– आ–आफ्नो क्षेत्रको निरन्तर अभ्यास ।